(၃)မိနဈ တရားထိုငျနညျး - Tameelay
(၃)မိနဈလောကျ တရားထိုငျမယျ တရားထိုငျပုံထိုငျနညျးလေးကို ဘုနျးဘုနျး အရငျဆုံးပွောပွမယျ။ ပထမဦးဆုံး ဝငျလထှေကျလေ ကကြနြနရှုရှိုကျပါ slow and deep breathing ကကြနြနရှုရှိုကျပါ။
ဘာဖွဈလို့(၃)မိနဈထိုငျတုနျးဆို အလုပျခှငျမှာ တရားထိုငျစခေငျြလို့ အကွာကွီးထိုငျရငျ ရိပျသာမှာမှ ထိုငျလို့ရတယျ ထငျမှာကွောကျလို့၊ ရိပျသာထိရောကျသှားနိုငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကတော့ ဒါတော့ပွောစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ အတိုငျးထကျအလှနျ။
ရိပျသာထိမသှားနိုငျလညျးပဲ အလုပျမှာ(၃)မိနဈကတော့ရတယျ၊ ဘုနျးဘုနျး ဒီတိုငျးပဲ တခါတခါ ကြောငျးမှာတရားထိုငျခြိနျမရှိဘူး ကားပျေါမှာပဲ တရားထိုငျတယျ၊ လယောဉျပျေါမှာ တရားထိုငျတယျ၊ လူကိုစောငျ့နတေုနျး တရားထိုငျတယျ၊ တခါတခါ အစညျးအဝေးခနျးမတို့ Conference ခနျးထဲမှာ (၃)မိနဈ (၄)မိနဈလောကျ ဒီတိုငျးထိုငျနပွေီးတော့ ဝငျလထှေကျလကေို ကွညျ့လိုကျတယျ ခန်ဓာကိုယျက ပငျပနျးနတေယျ တငျးနတေယျဆိုရငျ အဲ့ဒီတငျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပငျပနျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို မိမိရဲ့တဦးတညျးသော ရငျသှေးလိုသဘောထားပွီးတော့ မတ်ေတာစိတျနဲ့ ကရုဏာစိတျနဲ့ပှဖေ့ကျလိုကျတယျ၊ သူနဲ့ရနျမဖွဈဘူး။
ပငျပနျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို လနျးဆနျးသှားအောငျ one hundred ဆိုလား သောကျတဲ့ဟာတှလေေ အဲ့ဒီဟာတှသေောကျတာ သောကျတာက အပွငျက chemical တှနေဲ့ အပွငျက ဓာတုဗဒေတှနေဲ့ ဒီခန်ဓာကိုယျကို ပွုပွငျပွောငျးလဲအောငျလုပျတာ။ အဲဒါက အတိုငျးအတာတခုထိပဲ ရတယျ။
စိတျက ပငျပနျးမှုကိုတိုကျခိုကျနတေုနျးပဲ resist လုပျနတေုနျး fighting လုပျနတေုနျး၊ အခုဟာကတြော့ စိတျက ပငျပနျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ရနျမဖွဈဖို့ flight မလုပျဖို့ flight လုပျမယျ့အစား သူ့ကို မိခငျလိုပှဖေ့ကျပွီးတော့ အားပေးတယျ။
ပငျပနျးတာ နားလညျတယျ။ ပငျပနျးနသေလား။ ပငျပနျးတာ နားလညျတယျ။ အဲဒီမတ်ေတာစိတျလေးနဲ့ ဝငျလထှေကျလေ ရှု့။ ခေါငျးကိုကျတယျဆိုရငျ ခေါငျးကိုကျနသေလား? ခေါငျးကိုကျတာလေးကို ကွညျ့ပွီးတော့ ခေါငျးကိုကျတာပြောကျသှားအောငျဆိုပွီးတော့ ခေါငျးကိုကျတာကို မောငျးထုတျတဲ့စိတျဖွဈရငျ အဲ့နရောမှာ ခေါငျးကိုကျတာနဲ့ ရနျဖွဈနတော။
အဲ့လိုမဟုတျဘဲနဲ့ ခေါငျးကိုကျတာကို လကျခံတဲ့စိတျ တရားမှတျတယျဆိုတာ လကျခံတယျကိုပွောတာ၊ ဒေါသဖွဈရငျ ဒေါသဖွဈတယျမှတျဆိုတာ အဲ့ဒါ လကျခံတယျကိုပွောတာ၊ အဲတော့ ဒါလညျးပဲ ခေါငျးကိုကျနတေယျ ခေါငျးကိုကျနတေယျ လကျခံခိုငျးတာ။
လကျခံတဲ့နရောမှာ ရိုးရိုးအမှတျနဲ့ မဟုတျဘဲနဲ့ ကရုဏာဆိုတဲ့ compassion နဲ့လကျခံတယျ။ စိတျကညဈတယျ စိတျကဟိုပွေးဒီပွေး restless ဖွဈတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီ ဟိုပွေးဒီပွေး ပွေးနတေဲ့စိတျ အဲ့ဒီစိတျကိုလညျးပဲ မိမိရဲ့တဦးတညျးသော ရငျသှေးက ဂနာမငွိမျလို့ ဟိုပွေးဒီပွေးပွေးနတေယျ။
အဲဒီ ကလေးနဲ့ ရနျမဖွဈနဲ့၊ အဲဒီ ကလေးကို လဈြလြူရှုမထားနဲ့ fight or flight မလုပျနဲ့၊ သူဘာလုပျရမလဲဆိုရငျ သူ့ကို မတ်ေတာနဲ့ကွညျ့ပွီးတော့ နားလညျပေးပါ accept လုပျပါ။ စိတျထဲမှာ မကနြေပျတာလေး ဖွဈပျေါလာပွီဆိုရငျ အဲ့ဒီမကနြေပျတဲ့စိတျလေးကိုပဲ မိမိ၏တဈဦးတညျးသောရငျသှေး ပှပေို့ကျပွီးတော့အားပေးပါ။
ဘာဖွဈနတောတုနျး စိတျဆိုးနသေလား? It’s ok. It’s ok. မပူနဲ့။ အဲ့လိုအားပေးတဲ့ ပုံစံမြိုး မိခငျက တဦးတညျးသောသားကို အားပေးတဲ့ပုံစံမြိုး အဲ့လိုပုံစံမြိုး စိတျထားပွီးတော့ တရားထိုငျပါ။
အဲ့ဒီစိတျနဲ့ အဲ့ဒီကရုဏာစိတျနဲ့ တရားထိုငျတယျဆိုရငျ ဒီ(၃)မိနဈက အမြားကွီး တနျဖိုးရှိတယျ။ ဒီနအေ့လုပျလုပျတဲ့နဆေိုတော့ ခန်ဓာကိုယျပငျပနျးနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျးမြားတယျ အလုပျကလာတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှဆေို ခန်ဓာကိုယျပငျပနျးနိုငျတယျ။ အဲဒီတော့ ခန်ဓာကိုယျကို ပထမဦးဆုံး အဲ့ဒါလေးနဲ့ကွညျ့၊ ဘုနျးဘုနျးကလညျး ကားစီးလာတယျဆိုတော့ ညောငျးနတေယျ အဲ့ဒါလေးကို သတိနဲ့ ကရုဏာနဲ့ကွညျ့ပေးမယျ။
Mindful compassion နဲ့ ဒီပငျပနျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုကွညျ့မယျ။ သူနဲ့ရနျမဖွဈဘူး အဓိက။ ရနျဖွဈတယျဆိုရငျ ဒေါသ သူနဲ့ရနျမဖွဈဘူး။ ရနျဖွဈမယျ့အစား ဘာကိုအသုံးပွုတုနျး ကရုဏာကို အသုံးပွုမယျ။ ကရုဏာကို အသုံးပွုပွီးတော့ ကွညျ့တယျ။ ကရုဏာနဲ့ သူ့ကိုလကျခံတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရော ဝဒေနာကိုရော ဟိုတှေးဒီတှေးတှေးတဲ့စိတျကိုရော စိတျခံစား emotion တှကေို အကုနျလုံး ဒီ(၃)မိနဈအတှငျးမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အရာတှအေားလုံး Mindul compassion သတိဦးဆောငျတဲ့ ကရုဏာနဲ့ကွညျ့ပေးပါ။ ဝငျလထှေကျလကေိုလညျး ကကြနြနရှုရှိုကျပါ။
ကကြနြန အသကျရှုရှိုကျပါ၊ ခန်ဓာကိုယျကိုလြော့ထားပါ အကွောတှေ ကွှကျသားတှလြေော့ထားပါ စိတျမငွိမျလညျး သမာဓိမဖွဈလညျး ကိစ်စမရှိဘူး၊ သမာဓိမဖွဈတဲ့စိတျနဲ့ သှားရနျမဖွဈနဲ့ သမာဓိမဖွဈတာ မဖွဈဘူးလို့သိရငျ အဲ့ဒါတရားထိုငျရာ ရောကျပါပွီ တရားဖွဈပါပွီ။ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး ဝငျလထှေကျလေ ရှုရှိုကျပေးပါ။
(၃)မိနစ်လောက် တရားထိုင်မယ် တရားထိုင်ပုံထိုင်နည်းလေးကို ဘုန်းဘုန်း အရင်ဆုံးပြောပြမယ်။ ပထမဦးဆုံး ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနနရှုရှိုက်ပါ slow and deep breathing ကျကျနနရှုရှိုက်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့(၃)မိနစ်ထိုင်တုန်းဆို အလုပ်ခွင်မှာ တရားထိုင်စေချင်လို့ အကြာကြီးထိုင်ရင် ရိပ်သာမှာမှ ထိုင်လို့ရတယ် ထင်မှာကြောက်လို့၊ ရိပ်သာထိရောက်သွားနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဒါတော့ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ အတိုင်းထက်အလွန်။
ရိပ်သာထိမသွားနိုင်လည်းပဲ အလုပ်မှာ(၃)မိနစ်ကတော့ရတယ်၊ ဘုန်းဘုန်း ဒီတိုင်းပဲ တခါတခါ ကျောင်းမှာတရားထိုင်ချိန်မရှိဘူး ကားပေါ်မှာပဲ တရားထိုင်တယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ တရားထိုင်တယ်၊ လူကိုစောင့်နေတုန်း တရားထိုင်တယ်၊ တခါတခါ အစည်းအဝေးခန်းမတို့ Conference ခန်းထဲမှာ (၃)မိနစ် (၄)မိနစ်လောက် ဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးတော့ ၀င်လေထွက်လေကို ကြည့်လိုက်တယ် ခန္ဓာကိုယ်က ပင်ပန်းနေတယ် တင်းနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတင်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိရဲ့တဦးတည်းသော ရင်သွေးလိုသဘောထားပြီးတော့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ ကရုဏာစိတ်နဲ့ပွေ့ဖက်လိုက်တယ်၊ သူနဲ့ရန်မဖြစ်ဘူး။
ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်းဆန်းသွားအောင် one hundred ဆိုလား သောက်တဲ့ဟာတွေလေ အဲ့ဒီဟာတွေသောက်တာ သောက်တာက အပြင်က chemical တွေနဲ့ အပြင်က ဓာတုဗေဒတွေနဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်တာ။ အဲဒါက အတိုင်းအတာတခုထိပဲ ရတယ်။
စိတ်က ပင်ပန်းမှုကိုတိုက်ခိုက်နေတုန်းပဲ resist လုပ်နေတုန်း fighting လုပ်နေတုန်း၊ အခုဟာကျတော့ စိတ်က ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရန်မဖြစ်ဖို့ flight မလုပ်ဖို့ flight လုပ်မယ့်အစား သူ့ကို မိခင်လိုပွေ့ဖက်ပြီးတော့ အားပေးတယ်။
ပင်ပန်းတာ နားလည်တယ်။ ပင်ပန်းနေသလား။ ပင်ပန်းတာ နားလည်တယ်။ အဲဒီမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ ၀င်လေထွက်လေ ရှု့။ ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင် ခေါင်းကိုက်နေသလား? ခေါင်းကိုက်တာလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ ခေါင်းကိုက်တာပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းကိုက်တာကို မောင်းထုတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင် အဲ့နေရာမှာ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာ။
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာကို လက်ခံတဲ့စိတ် တရားမှတ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်ကိုပြောတာ၊ ဒေါသဖြစ်ရင် ဒေါသဖြစ်တယ်မှတ်ဆိုတာ အဲ့ဒါ လက်ခံတယ်ကိုပြောတာ၊ အဲတော့ ဒါလည်းပဲ ခေါင်းကိုက်နေတယ် ခေါင်းကိုက်နေတယ် လက်ခံခိုင်းတာ။
လက်ခံတဲ့နေရာမှာ ရိုးရိုးအမှတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကရုဏာဆိုတဲ့ compassion နဲ့လက်ခံတယ်။ စိတ်ကညစ်တယ် စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေး restless ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ဟိုပြေးဒီပြေး ပြေးနေတဲ့စိတ် အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲ မိမိရဲ့တဦးတည်းသော ရင်သွေးက ဂနာမငြိမ်လို့ ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေတယ်။
အဲဒီ ကလေးနဲ့ ရန်မဖြစ်နဲ့၊ အဲဒီ ကလေးကို လျစ်လျူရှုမထားနဲ့ fight or flight မလုပ်နဲ့၊ သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် သူ့ကို မေတ္တာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ နားလည်ပေးပါ accept လုပ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာလေး ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးကိုပဲ မိမိ၏တစ်ဦးတည်းသောရင်သွေး ပွေ့ပိုက်ပြီးတော့အားပေးပါ။
ဘာဖြစ်နေတာတုန်း စိတ်ဆိုးနေသလား? It’s ok. It’s ok. မပူနဲ့။ အဲ့လိုအားပေးတဲ့ ပုံစံမျိုး မိခင်က တဦးတည်းသောသားကို အားပေးတဲ့ပုံစံမျိုး အဲ့လိုပုံစံမျိုး စိတ်ထားပြီးတော့ တရားထိုင်ပါ။
အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ အဲ့ဒီကရုဏာစိတ်နဲ့ တရားထိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီ(၃)မိနစ်က အများကြီး တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဒီနေ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများတယ် အလုပ်ကလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆို ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပထမဦးဆုံး အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်၊ ဘုန်းဘုန်းကလည်း ကားစီးလာတယ်ဆိုတော့ ညောင်းနေတယ် အဲ့ဒါလေးကို သတိနဲ့ ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးမယ်။
Mindful compassion နဲ့ ဒီပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်မယ်။ သူနဲ့ရန်မဖြစ်ဘူး အဓိက။ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒေါသ သူနဲ့ရန်မဖြစ်ဘူး။ ရန်ဖြစ်မယ့်အစား ဘာကိုအသုံးပြုတုန်း ကရုဏာကို အသုံးပြုမယ်။ ကရုဏာကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကြည့်တယ်။ ကရုဏာနဲ့ သူ့ကိုလက်ခံတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရော ဝေဒနာကိုရော ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးတဲ့စိတ်ကိုရော စိတ်ခံစား emotion တွေကို အကုန်လုံး ဒီ(၃)မိနစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေအားလုံး Mindul compassion သတိဦးဆောင်တဲ့ ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါ။ ၀င်လေထွက်လေကိုလည်း ကျကျနနရှုရှိုက်ပါ။
ကျကျနန အသက်ရှုရှိုက်ပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျော့ထားပါ အကြောတွေ ကြွက်သားတွေလျော့ထားပါ စိတ်မငြိမ်လည်း သမာဓိမဖြစ်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ သမာဓိမဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သွားရန်မဖြစ်နဲ့ သမာဓိမဖြစ်တာ မဖြစ်ဘူးလို့သိရင် အဲ့ဒါတရားထိုင်ရာ ရောက်ပါပြီ တရားဖြစ်ပါပြီ။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ၀င်လေထွက်လေ ရှုရှိုက်ပေးပါ။
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 10, Sayardaw Post navigation
“လူသိရှငျကွား အထုပျဖွညျရငျဖှငျ့မယျ့အစား ကိုယျ့တရားနဲ့ကိုယျနေ”